भरतपुरमा पौडेलले किन फिर्ता लिन मानेनन् रेनु दाहालबिरुद्धको उम्मेदवारी ? — Sanchar Kendra
भरतपुरमा पौडेलले किन फिर्ता लिन मानेनन् रेनु दाहालबिरुद्धको उम्मेदवारी ?
चितवन । अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि नै चर्चाको केन्द्रमा रहेको भरतपुर महानगरपालिका यस पटक पनि उम्मेदवारी दर्तादेखि नै चर्चामा छ । यसकारण पनि भरतपुर प्रतिष्ठाको विषय बन्यो कि, माओवादी नेता रेनु दाहाल सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार छिन् ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्मका आश्वासका अघिल्तिर पौडेल डगमगाएनन् ।
उम्मेदवारी फिर्ता लिनका लागि आग्रह गर्न आएका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई आफ्नो निवासमा स्वागत गर्दै जगन्नाथ पौडेल ।
उनको उम्मेदवारी कायम तर पौडेल स्वयं भने कांग्रेसको साधरण सदस्य समेत रहेनन । ७१ वर्षीय पौडेललाई जीवनको उत्तरार्द्धमा आफैंले काम गरेको पार्टीले निकाल्यो ।
चितवनमा कांग्रेसको अधिक संख्या संस्थापन इतर छ । सभापति देउवाको रुची विपरीतका पात्रहरु जिल्लाको नेतृत्वमा छन् र जिल्लाबाट केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
अघिल्लो पटक रेनुलाई मेयर स्वीकार गरेका भरतपुरका कांग्रेस यसपटक कुनै पनि हालतमा माओवादीलाई कांग्रेसले समर्थन गर्न नहुने लाइनमा उभिए । चैत २० गते जिल्ला कार्यसमितिको बैठकबाट सर्वसम्मत र चैत २९ गते महानगरका वडा सभापतिहरुको बैठकले मेयर कांग्रेसले नछाड्ने निर्णय लियो ।
यसको जगमा टेकेर जिल्लाका नेतादेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म काठमाडौं धाए । आश्वासन पाए । तर, सत्तारुढ गठबन्धनबीच भागवण्डामा भरतपुर माओवादीले नै पायो ।
महानगरको मेयरलाई बटमलाइन बनाएका कतिपय जिल्लाका नेता पार्टी केन्द्रको निर्णय भनेर त्यसलाई बोकेर हिँड्न थाल्दा जिल्लाका पुराना नेता भने बटमलाइनमा नै अडिए ।
चितवन कांग्रेसको ‘टल पर्सनालिटी’ बनाएका पूर्व सभापति कृष्णलाल सापकोटाको नेतृत्वमा पूर्व सभापति, केन्द्रीय सदस्य, क्षेत्रीय सभापति, वडा सभापति, पूर्व सांसदहरु एक ठाउँमा उभिए ।
कसैले महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी नदिए म दिन्छु भनेर कस्सिएका सापकोटासहितका नेताहरुको पहलमा कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा भएको असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताको भेलाले जगन्नाथ पौडेललाई मेयरको उम्मेदवार बनाउने निर्णय लियो । ८४ वर्षीय नेता सापकोटा प्रस्तावक बसे भने, चितवनको महिला आन्दोलनमा अग्रणी छवि बनाएकी नेता मीना खरेल प्रस्तावक बसिन् ।
यो पक्षले प्रस्तावक र सर्मथकका कारण भोलि उम्मेदवारीमा नै धक्का लाग्न सक्छ भन्ने बुझेर कुनै पनि प्रलोभनमा पार्न नसक्ने ब्यक्तिहरुलाई सुझबुझ ढंगले छानेको देखिन्छ । यो कुरा गृहमन्त्री खाँण र राज्यमन्त्री श्रेष्ठको बागी उम्मेदवारी फिर्ता गराउने असफल प्रयासले पनि पुष्टि गरेको छ ।
केन्द्रीय नेताको दबावका कारण तनावमा रहेका पौडेल शनिबारबाट चुनावी अभियानमा होमिने तयारीमा छन् । भरतपुर ७ कृष्णपुरस्थित निवासमा दिनहुँ भेला हुने, त्यहीँ नै मेस चलाएर खाना खाने र चुनावमा लाग्ने तयारीमा उनी पक्षीय कार्यकर्ता छन् ।
पौडेल कानुन व्यवसायी हुन् । उनलाई साथ दिन दिनहुँ पौडेल निवासमा पुग्ने कांग्रेसका कार्यकर्ता दीपक अधिकारी पौडेलको अडानका पछाडि नेता कार्यकर्ताको ठूलो बल र आत्मविश्वासले काम गरेको बताउँछन् ।
उनले पौडेलकोमा आउने कांग्रेसको हरेक नेता कार्यकर्ताले कहिलेसम्म माओवादीका लागि बलिदानी दिनुपर्ने भनेर प्रश्न मात्रै सोध्ने गरेको बताए । पौडेलको बागीले सत्ता गठबन्धनको मतमा प्रभाव पार्ने देखिएकै कारण सरकारका मन्त्रीहरुसमेत दवाव दिन आएको कुरा प्रस्ट नै हुन्छ । पौडेलको पक्षमा कांग्रेसको ठूलो नेता कार्यकर्ताको पंक्ति जानसक्ने सम्भावना भएकै कारण सत्ता गठबन्धनकी मेयर उम्मेदवार रेनु दाहालको जित सहज नहुने विश्लेषण भरतपुरमा गर्न थालिएको छ ।
त्यसबेला महानगरको मेयरमा रेनु दाहालले ४३ हजार १२७ मत ल्याएर जित्दा एमालेका एमालेका देवी ज्ञवालीले ४२ हजार ९२४ मत ल्याए । फरक जम्मा २०३ मतको मात्रै थियो ।
राप्रपाबाट मेयर उठेका बद्री तिमिल्सिनाले ६ हजार ८४२ मत ल्याए । उपमेयरमा कांग्रेस माओवादी गठबन्धनबाट जितेकी पार्वती शाहले ४७ हजार १९७ मत ल्याएर जितिन् । एमालेकी दिव्या शर्माले ३९ हजार ५२५ मत ल्याइन् ।